Ixabiso eliphantsi leCarbon Fibre mveliso kunye nabathengisi | U-Chengyang
Ilaphu leCarbon Fibre Twill luhlobo olutsha lwezixhobo zefayibha ezinamandla aphezulu kunye nefayibha ephezulu yemodyuli enomxholo wekhabhoni ongaphezulu kwama-95%.
Ifayibha yeCarbon "intsimbi engaphakathi ethambileyo yangaphakathi", umgangatho ulula kune-aluminium yentsimbi, kodwa amandla aphezulu kunentsimbi, amandla aphindwe kasi-7 kunesinyithi; kwaye nokumelana, iimpawu modulus eliphezulu, kubalulekile izinto zokhuselo emkhosini kunye noluntu ukusetyenziswa.
Ilaphu leCarbon Fibre Twill
Ilaphu leCarbon Fibre Twill luhlobo olutsha lwezixhobo zefayibha ezinamandla aphezulu kunye nefomulus ephezulu yemoya enekhabhoni engaphezulu kwama-95% .Ifayibha yekhabhoni "intsimbi engaphakathi ethambileyo yangaphakathi", umgangatho ulula kune-aluminium yentsimbi, kodwa amandla aphezulu kunentsimbi, amandla ayi-7 amaxesha entsimbi; kwaye nokumelana, iimpawu modulus eliphezulu, kubalulekile izinto zokhuselo emkhosini kunye noluntu ukusetyenziswa.
1) Amandla aphakamileyo, uxinano oluphantsi, amandla anokufikelela kumaxesha angama-6 ukuya ku-12 ngentsimbi, ukuxinana yikota enye yentsimbi.
2) ukudinwa okuphezulu;
3) uzinzo oluphezulu;
4) Ukuqhuba kombane ngokugqwesileyo kunye nokushisa;
5) Ukusebenza kokunciphisa ukungcangcazela;
6) ukuxhathisa ubushushu;
7) Umlingani wokungqubana mncinci kwaye uxinzelelo lokunxiba lubalasele;
8) nokumelana kunye nobomi obude.
9) Ukungena kweX-ray kukhulu.
I-10) Iplastikhi elungileyo, inokwenziwa nakweyiphi na imilo ngokwendlela yokubumba, kulula ukuyila kwaye kube lula ukuyicwangcisa.
Ilaphu leCarbon Fibre Twill Ukusetyenziswa ngokubanzi ekulobeni, izixhobo zemidlalo, iimpahla zemidlalo, i-aerospace kunye nezinye iinkalo, ezomkhosi zisetyenziselwa ukwenza iirokethi, imijukujelwa, iisathelayithi, iiradar, iimoto ezingena mbumbulu, iivesti zokuthintela iimbumbulu kunye nezinye iimveliso zemikhosi ebalulekileyo. Njengee-racks zebhayisikile, iifolokhwe zangaphambili zebhayisekile, iindawo ezisecaleni zebhayisekile, iiklabhu zegalufa, izinti ze-hockey, iipali ze-ski, iintonga zokuloba, amalulwane e-baseball, ii-racquets zeentsiba, iityhubhu ezijikelezayo, izinto zezihlangu, iminqwazi enzima, iivesti zokuthintela iimbumbulu, iminqwazi yokukhusela iimbumbulu, iinqanawa, iizikethi , amaphenyane, iiphaneli ezicaba, izixhobo zonyango, amacebo okucoca uthuli, umphunga (umatshini) ishishini lesithuthi, oomatshini bokwenza amashishini, ukuqinisa ukwakha, iincakuba zomoya, njl.
Ukupakisha: kumazwe angaphandle ukupakisha okanye wena njengemfuneko yakho.
Ukuhanjiswa: elwandle / ngomoya / nge-DHL / Fedex / i-UPS / i-TNT / i-EMS okanye enye indlela oyithandayo.
Egqithileyo 1k Ingubo yeCarbon Fibre
Okulandelayo: Ilaphu leBlue Carbon Fibre
I-4x4 Twill yeCarbon Fibre
Abavelisi beCarbon Fabric
Acrylic Camera Fibreglass, Indwangu yeFiliclass Camera, Ingubo yeFiberglass, Ingubo yeAlglised fiberglass, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu,